China polyethylene Glycol 4000 Peg4000 ụlọ ọrụ na ndị nrụpụta | Yinuoxin
A na-eji PEG-4000 eme ihe na mbadamba, capsule, ihe nkiri, ọgwụ mgbochi, suppository, wdg.
A na-eji PEG-4000 na 6000 eme ihe dị ka ndị na-emepụta ọgwụ na ụlọ ọrụ ọgwụ, nkwadebe nke suppository na mado, ihe mkpuchi na ụlọ ọrụ akwụkwọ iji mee ka mpempe akwụkwọ na ịdị mma nke akwụkwọ dịkwuo elu, mmụba na ụlọ ọrụ roba iji mee ka mmanụ na plasticity dịkwuo elu, belata ike oriri na nhazi na ogologo ọrụ ndụ nke roba ngwaahịa.
Enwere ike iji ya dị ka matriks na ọgwụ na ụlọ ọrụ ịchọ mma iji gbanwee viscosity na agbaze agbaze, mmanụ na coolant na roba na metal nhazi ụlọ ọrụ, dispersant na emulsifier na pesticide na ink ụlọ ọrụ, antistatic gị n'ụlọnga na mmanu na akwa ụlọ ọrụ.
N'ihi plasticity nke PEG na ike ịhapụ ọgwụ, akwa molekụla dị arọ PEG (PEG4000, PEG6000, peg8000) bara ezigbo uru dị ka nrapado maka nrụpụta mbadamba. Peg nwere ike ime ka mbadamba mbadamba na-egbu maramara ma na-eji ire ụtọ, ọ dịghị mfe imebi. Tụkwasị na nke a, obere PEG (PEG4000, PEG6000, peg8000) dị ntakịrị nke dị arọ molekụla dị elu nwere ike igbochi njigide n'etiti mbadamba mkpuchi shuga na n'etiti karama.
Ọdịdị ℃ 25））
Oge mmezi ℃
Mmiri mmiri （%）
1% Aqueous ngwọta）
Milky White siri ike
Usoro a nke ngwaahịa na-emekarị soluble na mmiri na dị iche iche organic solvents, ma unyi anaghị agbasa na aliphatic hydrocarbons, benzene, ethylene glycol, wdg Ọ gaghị hydrolyze na-aka njọ. Ọ nwere ezigbo nkwụsi ike, mmanu, mmiri solubility, njigide mmiri, njigide na nkwụsi ike ọkụ. Ya mere, dị ka mmanu mmanu, moisturizer, dispersant, nrapado, sizing gị n'ụlọnga, wdg, na ahịa ọgwụ, ntecha, roba, plastik, chemical eriri, akwụkwọ Ndinam, agba, electroplating, pesticide, metal nhazi, nri nri na ndị ọzọ ọrụ na-eji ọtụtụ ebe.
Mbukota nkọwapụta:mmiri mmiri mbụ 230kg kpaliri gbọmgbọm nkwakọ. Nkwakọ ngwaahịa siri ike nke izizi 25kg Kraft.
Nchekwa:Enwere ike ibuga ngwaahịa a dịka General Chemicals. Chekwaa ke akọrọ na ventilated ebe iji zere ìhè anyanwụ na mmiri ozuzo.
Kwuru:ụlọ ọrụ anyị na-enyekwa ụdị ngwaahịa PEG dị iche iche.
Nke gara aga: Polyethylene Glycol 3350 Peg3350
Osote: Polyethylene Glycol 6000 Peg6000
Ebu Yijie R-90 Esịtidem mmako akpụzi Hapụ ...